DHAGEYSO:Guddoomiyaha xisbiga Wadani oo kulan la qaatay qurbo joogta xisbigiisa | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Guddoomiyaha xisbiga Wadani oo kulan la qaatay qurbo joogta xisbigiisa
DHAGEYSO:Guddoomiyaha xisbiga Wadani oo kulan la qaatay qurbo joogta xisbigiisa
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ee Wadani C/raxmaan Maxamad C/laahi Cirro oo Kulan la qaatay dadka Qurbo Joogta ah ee Xisbigiisa ka Tirsan ayaa uga Mahadceliyay garab istaaga ay Xisbiga u Muujiyeen.
Waxaa uu dhanka kale sheegay in ilaa Saddex Doorasho oo Soomaaliland u balansan tahay ay guul weyn ka Rajaynayaan.
Guddoomiye Cirro ayaa sheegay in doorashooyinkii isku sidkanaa ee Golaha Deegaanka iyo Golaha Wakiillada ee Soomaaliland ka dhacay 31-dii Bishii Shanaad ee Sanadkaan uu Xisbiga Wadani ku Guulaystay saddexda Doorasho ee kala ah Tan Golaha Odayaasha Ama guurtida,Tan Madaxweynaha iyo Mid ururradana ay Rajaynayaan in Xisbiga Wadani uu guulo waa weyn ka keenayo.
Waxaa uu intaa ku daray in dhamaan Doorashooyinka haray ay Si weyn ugu diyaar Garoobeen.
Previous articleMudavadi oo sheegay in hadii uu madaxweyne noqdo uu diiradda saari doono arrimaha dhaqaalaha
Next articleDowladda Soomaaliya oo Sheegtay in haweenka ay saamayn kasoo gaartay Covid19